June 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Jun 30, 2016 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Alfurqaan waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Dhageyso…
Warka Duhur waxaa maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 30 06 2016.
Dagaal udhaxeeyay Ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee wilaayada shabeelaha Hoose iyo kuwa Dowladda Xasan sheekh ayaa xalayto ka dhacay qeybo kamid ah Gobalka. Ciidamada Xarakada shabaabul mujaahidiin oo la socday dhaqdhaaqa…
Warka Subax ee ka baxay idaacadda alfurqaan saaka oo khamiis ah waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 30 06 2016.
guuleed	 Jun 29, 2016 0
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso. Halkan Ka Dhageyso Warka duhur 29 06 2016.
Axmad	 Jun 29, 2016 0
Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku waramaya in weerar xoogan lagu qaaday Garoonka caalamiga ah ee Ataatoork ee dhaca magaalada Istanbuul oo kamid ah magaalooyinka ugu weyn dalkaas, sida ay sheegayaan wararka la helayo, waxaa…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey dalka iyo dibadda, dhagayso wararka ka baxa idaacadda Alfurqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 29 06 2016.